Hery Rajaonarimampianina : “Ampy tsara ny tahirim-panafody hiadiana amin’ny aretina pesta” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Ampy tsara ny tahirim-panafody hiadiana amin’ny aretina pesta”
Tsy tokony hitaintainana, na hiaina anaty tahotra ny vahoaka malagasy miatrika izao vanim-potoana hisian’ny valanaretina pesta izao, satria dia ampy tsara hiatrehana tanteraka izany ny tahirim-panafody eto amintsika. Ankoatra nyezaka maro efa nataon’ny fitondram-panjakana mantsy, dia nanolo-tanana an’ i Madagasikara ihany koa ny sampan-draharaha iraisam-pirenena ho an’ny fahasalamana na ny OMS, omaly teny amin’ny DHL Ankorondrano. Nanolotra fitaovana maro entina miaro amin’izay valanaretina izay, toa ny fonon-tanana miisa 230 000, ny tampim-bava miisa100.000,izayniarahan’izy ireo tamin’ny masoivoho amerikana izany. Nisysolomaso, sy akanjo maro natao hiarovana amin’ny pesta ihany koa natolotry ny OMS. Teo ihany koa ny fanomezana “kartman” miisa 2000, izay fanafody famonoana voalavo sy parasy, heverina fa isan’ny mitondra izay valanaretina pesta izay.Haparitaka any amin’ireo fokontany miisa 192 eto an-drenivohitra izany, ary mbola hiampy 400 isa izanyamin’ny herinandro iny, izay alefa any Toamasina sy ireo faritany hafa heverina famisy ityvalanaretina ity.Tsy nohadinoin’ny OMS tao anatin’izany ny fanohanana an’I Madagasikara , ny fanomezana “antibiotiques” miisa 1.190.000, izay masahana marary miisa 7000 sy olona 30.000 izay mifanerasera amin’izy ireo. Marihina ihany koa fa mbola hiampy 244.000 ireofanafody ireo amin’ny herinandro ho avy io.Ankoatra an’I OMS moa, dia nitondra nyanjara birikiny ho fanampiana an’I Madagasikara, io omaly io ihany, I Etazonia tamin’ny alalan’ny USAID. Nilaza ny masoivoho amerikana fa miray hina ary miara-miatrika tanteraka amin’ny vahoaka Malagasy amin’izao toe-javatra lalovany izao. Noporofoany tamin’ny alalan’ny fanomezana fiara miisa 10 natao hitaterana ireo marary, sy fiara miisa 04 hafa, hampiasaina amin’ny fanentanana eny ifotony izany.Mbola hiampy fonon-tanana miisa 71.000 sy tampim-bava miisa 32.000 moa ireo fitaovana fiarovana natolotr’I Etazonia sy ny OMS ireo, ary ho avy tsy ho ela izany. Natrehan’nyfiloham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fanolorana ireo fitaovana maro sy fanafody iadiana amin’nypesta ireo, ary nanambarany filohan’nyrepoblika nandritran’ny lahateny izaynataony io omaly io fa tsy tokony hiahiahy ny vahoaka Malagasy satria dia ampy tanteraka ny fanafody, hiatrehana s y hiadiana amin’izany valanaretinaizany.”Aoka ho tony isika satria efa mandeha ny ady. Efa betsaka ihany koa ny toromarika efa nomena, ka aoka tsy hanao dokotera tena fa hanatona mpitsabo avyhatrany”, hoy ny nambarany. Nanentana ny rehetra ihanykoa izymba handray ny andraikitra tandrifyazyavy,ary nampitandrina ireompanely tsaho any anaty tambazotran-tsosialy sy eny anivon’nyfiarahamonina izaymampihorohoro vahoaka ny tenany. “Tsy any amin’n yfilalaovana ny ain’nyvahoaka no hanaovana adypolitika”, hoy ihany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, rehefa avy nanao fitsidihana ny “Cellule de crise” eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana tetsy Ambohidahy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, omaly, avy hatrany dia nitohy teny amin’ny Institut Pasteur izany. Fitsidihana nijerena ny tahiry amin’ireo fanaovana fitsirihana sy fitiliana haingana no natao tamin’izany.
Amin’izao fotoana izao, manana tahiry eo amin’ny TDR miisa 1.300 ny Intsitut Pasteur, ary mbola mitohy hatrany ny famokarana izany. Raha ny fanazavana, ao anatin’ny famokarana TDR mihoatra ny 6.000 ny Institut Pasteur amin’izao fotoana izao, izay tanjon’izy ireo ny hamokatra hatramin’ny 18.000 hatramin’ny faran’ny volana izao. Izany dia hoenti-mandringana ny valanaretina pesta avokoa. Nambara tamin’izany fa manana ireo fitaovana rehetra ilaina hiadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina pesta i Madagasikara. Raha ny fanazavan’ny teknisianina iray, noho ny fanampian’ny Intsitut Pasteur-n’ny Paris, Frantsa, raha tao anatin’ny 48 ora vao mivaly ny fitiliana teo aloha teo, amin’izao fotoana izao, mivaly ao anatin’ny 5 ora monja izany. Izany dia manamora ny fombafomba rehetra amin’ny fitsaboana eny anivon’ireo hopitaly.
Nangonin’i Mialy R. sy MN
Nampandefitra ny hambom-po politikany ny Filoham-pirenena ankehitriny, ary nampiseho ny fitiavan-tanindrazana marina tamin’ ny alalan’ ny fanekena sy fitadiavana marimaritra iraisaina ahafahan’ ny firenena mivoaka amin’ izao olana izao. Porofon’ izany ny fanekena sy ny ...Tohiny